Etu esi akụ osisi apụl nwere mkpuru osisi n’oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ n’oge opupu ihe ubi - Osisi - 2020
Ihe ọkụkụ nke osisi apụl: atụmatụ nke ịkụ
Osisi apụl bụ osisi mkpụrụ osisi kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ ubi. Ọtụtụ na-akụ ọtụtụ iche iche n'otu oge na saịtị ha. N'ihi ọdịiche a, ị nwere ike ịkwado vitamin maka afọ niile. Osisi ahụ enweghị nkọwa ma na-eguzogide ọnọdụ dịgasị iche iche ihu igwe. Ọ kachasị mma itolite apụl n'etiti uzo.
Omenala nke osisi apụl, na-ele anya na mbụ, dị mfe ma dị mfe. Mana nke a abụghịcha eziokwu. Iji topụta osisi mara mma, na-amị mkpụrụ, ị ga-ebu ụzọ kụọ ya dịka iwu niile si dị.
Mgbe ị ga-akụ osisi apụl
Enwere ike ịkụ mkpụrụ dị iche iche na mgbụsị akwụkwọ, n'oge ọkọchị na oge opupu ihe ubi. Oge ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Onye na-elekọta ubi kwesịrị ilekwasị anya na ihu igwe, ọdịdị ala na njiri mara nke ụdị dị iche iche. N'ebe ndịda, a na-etinye osisi n'ime ala n'oge ọdịda. Nke a bụ n'ihi ụkọ mmiri tara akpụ na mmiri ozuzo zuru oke. Na mpaghara ugwu ha na-ahọrọ oge opupu ihe ubi.
Uru uto na cons
A na-eme ya site na Septemba rue Nọvemba. A na-ekpebi ụbọchị ọ bụla dabere n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe. Dịrị na-anọ izu 4-5. Uto nke mgbọrọgwụ a na-aga n'ihu ruo mgbe ikuku ikuku na-agbada n'okpuru +4 Celsius. Uru ndị ọzọ gụnyere ọnụ ego nke seedlings, enweghị mkpa maka ịgba mmiri ugboro ugboro. Ihe ọghọm nke usoro a gụnyere frosts siri ike, snowfalls, ifufe na òké. Ntgha osisi n’oge mgbụsị akwụkwọ nwere ike ibute ọnwụ nke osisi. Ha, n'adịghị ka ndị okenye, na-atụ egwu obere okpomọkụ.
N'oge opupu ihe ubi, uru na ọghọm
A na-agbanye mkpụrụ dị iche iche n'ala ka ọ thaws. Ihe ọzọ dị mkpa bụ ọnụnọ akụrụ na-enweghị akwụkwọ. Mgbe ị na-azụ osisi sitere na ya ifuru, oge idebe ga-amụba nke ukwuu. Ihe ịrịba ama nke ọrịa fungal nwere ike iputa. Otu n'ime uru ndị a bụ ngwa ngwa mmepe nke mgbọrọgwụ na enweghị mkpa maka nchekwa nke seedlings. Tupu ịzụta osisi, onye na-elekọta ubi na-enweta ohere iji nyochaa ọnọdụ ya.
Nchịkwa ahụ mgbe ị na-azụ ihe ọkụkụ na oge opupu ihe ubi adịghị iche na iche iche. Ihe isi ike bilitere na mkpụrụ osisi, nke akụkụ ya na-emeghe tupu etinye ihe ọkụkụ n'ime ala. Ọ dị mkpa inweta tupu ụdị mmiri ebido. Ọtụtụ na-achọpụta na ndị nrụpụta anaghị egosi ngwaahịa mgbe niile, yabụ na ịchọpụta njikọta ụdị a bụ nnọọ nsogbu.
A ga-emecha kụọ seedling na oge opupu ihe ubi tupu etiti Mee.
Ihe gbakwunyere bụ na mkpọrọgwụ osisi ahụ ga-ewere ọnọdụ n'ọnọdụ okpomọkụ dị mma (oge ịlaghachi oge adịghị njọ). N'oge ọkọchị, osisi apụl ga-eto ma na-atachi obi n'oge oge oyi. Ya mere, na Siberia, a na-eji naanị akuku mmiri.
A na-eji nhọrọ a mee ihe n'ọnọdụ mberede. Tupu ịgha mkpụrụ, onye nwe ubi ahụ ga-eme nri n’ala, were ihe mgbochi na-egbochi ahụhụ, kpochapụ ahihia. Teknụzụ ahụ ka na-abụ otu ihe. Nyochaa steeti nke seedling siri ike karịa mgbe ị na-akụ n'oge ndị ọzọ n'afọ. Nke a bụ n'ihi na osisi mgbe ọkọchị ọkọchị na-arịa ọrịa ogologo oge.
Nhọrọ mkpụrụ osisi Apple
Varietydị dịgasị iche iche nwere atụmatụ nke ya. Otu n'ime njiri mara ya bụ iguzogide ntu oyi.
N'ime nkpuru chara acha bu: Ntutu uto nke mbu.
N'ime ụdị oge etiti, Uralet na-ewu ewu karịsịa. Mkpụrụ osisi apụl ndị a na-atọ ụtọ, na-egbuke egbuke, na-atọ ụtọ.
Antonovka bụ onye nnọchi anya oge iche. A pụrụ ịchekwa mkpụrụ osisi mmiri ara ehi ogologo oge.
Mkpụrụ osisi siri ike nwere ike ibute seedlings site na ụdị dịka Veteran, Anis ọcha na Velvet.
Họrọ osisi bụ nzọụkwụ mbụ. Mkpa ya siri ike ikwubiga okwu ókè. Usoro algorithm mara mma dị mfe:
Chọpụta ụdị ndị dị mma maka etolite na mpaghara.
Kpoo onye na-elekọta ụmụaka ahụ, na anọghị ya - na ọgbakọ ndị na-elekọta ubi ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa nkeonwe.
Zuta nkpuru. Iji mee nke a, ịkwesịrị ikpebi ihe ngosipụta dịka oge mkpụrụ, ogo ngwaahịa, njiri ala, omimi nke ala mmiri, afọ na ọnọdụ izugbe nke ihe ọkụkụ.
Ọnụ ego ọ dabere na “nkwakọ ngwaahịa” ahụ. A ga-ahapụ ka mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ tinye ya na akpa pụrụ iche. Nhọrọ nke ikpeazu na-ekwe nkwa mmiri chọrọ na ichekwa usoro ahụ.
Lingsmụ osisi na - edobe ala ozugbo enwere ike mgbe nnweta iji gbochie ọnwụ nke sistemụ nkụ.
Nhọrọ nke ọnọdụ maka osisi apụl bụ mpaghara dị mkpa. Were ya tupu oge eruo. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na mkpụrụ osisi amịghị ebe ahụ. Ihe ibute mkpụrụ osisi apụl ga-emezu ihe ndị a:
Ala mmiri. Ha agaghị agabiga ihe karịrị 2 m n’elu. Iji zere kọntaktị achọghị, a na-etinye mpempe akwụkwọ n'ala ala olulu ahụ. N'ihi nke a, usoro mgbọrọgwụ ga-eto eto n'akụkụ, mana ọbụghị n'ime ime mmiri.
Oghere dị n'etiti mkpụrụ osisi ahụ dịkarịa ala mpe 2. Ogologo nke oghere ahụ kwesịrị ịdị nha ka ogo nke ihe ọkụkụ toro eto. N'ihi ya, ha na-ahụ na osisi ndị ahụ anaghị egbochi ibe ha.
Iche-iche. Osisi apụl dị ka ahịhịa nke nwere osisi. Ọnụnọ nke seedlings nke ọtụtụ iche.
Ọnọdụ Varietydị dịgasị iche iche nwere ihe ha chọrọ. Ekwesighi iku osisi Apple na mpaghara dị nso na isi ụzọ. Ma ọ bụghị ya, n'ọdịnihu, okpueze ahụ agaghị abụ ihe ịchọ mma, kama ọ bụ ihe mgbochi.
Mkpụrụ osisi apụl na-arụ ọrụ dabere na ihe mejupụtara ala. Omenala hụrụ ìhè, rụrụ, ala acidic. Ọ bụ ihe na-achọsi ike ka ọ maa mma. Ihe isi ike nwere ike ibili ma ọ bụrụ na ala bụ nke apịtị, okwute ma ọ bụ gravel. Enweghị nri, na-enweghị nke seedling agaghị enwe ike ịzụlite kwesịrị. Maka otu ihe ahụ, ndị ọrụ ubi anaghị akwado ịkụnye osisi n'ọnọdụ osisi apụl mbụ. Needswa kwesiri izu ike. Iji mee ka ala ahụ dara ogbenye jupụta, ọ na-agwakọta ya na mineral na fatịlaịza nri. Otu n'ime ihe ndị a na-achọsi ike bụ uyi osisi na superphosphate.
Nke a bụ aha nke nkụda mmụọ, a na-akwado ya izu 3-4 tupu ịgha mkpụrụ apụl. N'ihi ya, ha na-ike ndị kasị ala ọnọdụ maka seedling. Olulu ahụ, dayameta nke 1 mita, na-ahụ maka iji kpoo ma dozie oge ahụ akọwapụtara. A na-etinye ụwa site na nchikota ezumike n'ime akpa abụọ. Enwere ike iji mmanụ mmanụ. A na-etinye oyi akwa dị elu na mkpanaka nke mbụ, akwa dara ogbenye na nke abụọ.
A na-eme mgbidi nke olulu ahụ. A na-ekpebi omimi ya site na otu esi agbanye mkpọrọgwụ nke osisi ahụ yana ụdị ya dị iche iche. Osisi dị n'etiti ezumike ahụ, dayameta ya kwesịrị ịbụ ihe dịka 5 cm, na ịdị elu nke ihe dịka 1.5 m, nke mere na ọ na-eto 40-50 cm n'elu ala. A ga-akpọ akụkụ nke nkwado ahụ nke ga-adị n'ime ala ọkụ. Nke a dị mkpa iji gbochie ire ere. A na - ewepụ ihe niile na - enweghị isi na ala nke enwetara site na igwu, tinyere okwute, ahịhịa na mgbọrọgwụ.
Maka inye osisi apụl na-eji ngwakọta nke mineral na ihe ndị dị ndụ. Enwere ike ịzụta ya ka emebere ya ma ọ bụ jiri aka ya rụọ ya. Mgbe ị na-ahọrọ nhọrọ nke ikpeazụ, ọnọdụ ala na ọkwa pH na-eduzi ha. Dị ka ọ dị, fatịlaịza siri ike na-agụnye humus, nnu nnu, superphosphate.
Ọ bụrụ na ala nwere acidic nke ukwuu, ihe dị ka 200 g nke lime slaked nwere ike itinye ya na ngwakọta a rụchara.
Etu esi akụ osisi apụl: nzọụkwụ site na ntuziaka nke nzọụkwụ
N'uhuruchi nke akuku, etinye osisi ahu n’ime mmiri. N'ihi nke a, usoro mgbọrọgwụ na azuokokoosisi ga-enwe ike ịgbatị ma belata mmiri.
Tupu ihe omume ahụ, ebipụ ome niile na-emetụta na seedling. Ihe ncheta, ebu, mmebi kwesịrị ịnọ.
A na-etinye mkpụrụ osisi, na-agbasa mgbọrọgwụ na mkputamkpu n'olulu. Jiri nwayọ rahụ ụra na tamp, jiri nwayọọ na-amị amị ahụ ka enweghị mkpọtụ ọ bụla.
Iji gbochie nkwụsịtụ ma bulie iguzogide ikuku, a na-etinye osisi ahụ na nkwado akwadoro. Maka garter, a na-ahapụ ya ka o jiri mpempe anụ ahụ dị nro ma ọ bụ ihe nkiri.
Mgbe ahụ ọ ka ga-awụpụ apụl apụl n'okpuru mgbọrọgwụ. Ọ ga-ebu bọket atọ ruo ise. A na-ekpebi ọnụọgụ nke mmiri mmiri dabere na oge ọdịda. Olulu ahụ fọdụụrụ mgbe a gbasara ala ahụ bụ ahịhịa ma ọ bụ sawdust.
A na-aghọrọ ahịhịa kwa afọ, na-ahapụ cm 75. N'ime osisi dị afọ abụọ, a na-eme ka mbelata akụkụ dị mkpụmkpụ.
Mgbe seedling chọrọ kwesịrị ekwesị na-elekọta. Na enweghị ya, osisi ahụ nwere ike ịnwụ.
Njehie mgbe ị na-akụ osisi apụl
N'ime nlele kachasị na-anabata mgbe ị na-atụgharị osisi apụl, enwere:
Mkpebi na-ezighi ezi nke ogo mgbọrọgwụ - a na-ebelata ngwa ngwa nke ihe ọkụkụ. Amachibidoro ya imejupụta ụwa. N'agbata ya na ala kwesịrị ịdịkarịa ala cm 5. Ma ọ bụghị ya, osisi apụl ga-arịa ọrịa ogologo oge.
Mgbe ọ daba na olulu a na-akwadebebeghị tupu ya emee, ala ahụ ga-edozi, nke ga-eduga n'inwe mkpịsị ugodi na-enweghị isi.
Wateringgba mmiri ókè - microflora dị mma na-ala n'iyi.
Mmebi nke oke na nkwadebe nke nri nri - oxygen agụụ na ọnwụ nke anụ ahụ na-enye ihe oriri.
Ojiji nke ahihia ohuru, nke gha ewepu amonia na hydrogen sulfide, nke g’enwe ahihia na-eto eto.
Enweghị nkwado - mmebi nke azuokokoosisi.
Nke ọ bụla n'ime njehie ndị a ga-enwe mmetụta na-adịghị mma ma na ọnọdụ osisi ahụ dum na n'ihe ọkụkụ ga-eme n'ọdịnihu.
Mazi Summer bi na-atụ aro: Atụmatụ maka onye nwe ubi
Iji mee ihe maka mbọ a kụrụ osisi apụl iji kọwaa onwe ya, ọ dị mkpa iburu n'uche nuances ndị a:
Ọ bụrụ na ájá ụrọ dị na mpaghara ahụ, a chọrọ ọpụpụ mmiri. Dika eji eji ite, iberibe osisi na okwute. Ọ ga-aba ụba nke olulu. N'okpuru ọnọdụ ndị a, mmụba na mmepe nke sistemụ mgbọrọgwụ, mgbochi mmiri nke ịgbanye mmiri, yana mbelata ihe ọghọm nke ọrịa fungal ga-eme.
A na-ekpochapụ ihe ndị na-adịghị mma nke ájá ájá site na sludge. Ha kpuchie ala nke olulu. N'ihi nke a, ala na-anọgide mmiri.
Na Siberia, a na-akụ osisi apụl n'ugwu dị nro, nke a na-akwadebe n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Ọ bụrụ na mmiri na - eme ala, mmadụ ga - ahapụ teknụzụ ndị metụtara olulu. N'okpuru ọnọdụ, ugwu ndị etolitere na mbara ala ga-abụ nhọrọ kachasị mma. A na-egwu ala ma na-agbakọta. Suchdị osisi apụl dị otú a ga-agbagha nlekọta ahụ, mana ọ ga - echebe osisi ahụ ka ọ ghara ire ere.
Iji mepụta uto nke usoro mgbọrọgwụ, enwere ike iji ciment kama iji mmiri mmiri, slate na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ha dejupụta n’ala olulu ahụ ozugbo tupu ha akụ osisi apụl. Nsonaazụ bụ osisi echekwara ka nje ghara ịta ahịhịa, ire ure na oke mmiri.
Site na nkwadebe kwesịrị ekwesị maka ịkọ, nlekọta dị mma, ịgbasochi anya na ntuziaka na usoro nke usoro, mkpụrụ mbụ ga-enweta na afọ 5-6.